Cabsi laga qabo Al-Shabaab oo looga kala cararay War-sheekh | KEYDMEDIA ONLINE
Cabsi laga qabo Al-Shabaab oo looga kala cararay War-sheekh
Degaanka War-sheekh waxaa Al-Shabaab laga xoreeyay 10 sano ka hor, tallaabada ay ku doonayaan in ay mar kale kaga taliyaan, ayaana ka turjumeysa, fashilka amni ee dalka ka jiray afartii sano ee la soo dhaafay.
WAR-SHEEKH, Soomaaliya – Cabsi xooggan ayaa soo food saartay bushada ku dhaqan magaalo xeebeedka, quruxda, nabadda iyo taariikhda kulansatay ee War-sheekh, kadib markii ay Kooxda Al-Shabaab la wareegeen gacan ku heynta degaanno hoos taga, magaaladaan dhacda xeebta badweynta Hindiya ee gobolka Shabeellaha dhexe.
Sida ay sheegayaan dadka degaanka, tan iyo bartamihii todobaaadkii hore, waxaa magaalada ka maqan, maamulkii degaanka, kadib markii ay u baxsadeen Caasimadda Soomaaliya Muqdisho oo qiyaastii masaafo 65km, ay u dhaxeyso War-sheekh.
Mas’uuliyiinta ka baxay magaalada waxaa ka mid ah Guddoomiye Xasan Darafey, iyo ku xigeennadiisa oo Jul 22, 2021, degaanka ku soo dhaweeyay Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh.
Kooxda Al-Shabab, ayaa ku guuleysatay in ay maamusho degaannada ku hareereysan, Balcad iyo Afgooye, hayeeshee, waxa ay markaaan u muqqdaan in ay u qalab qaateen degaannada xeebaha, waxayna taasi hoosta ka xarriiqaysaa istaraatiijiyadda Al-Shabaab ee go’doominta Muqdisho.
4-tii sano ee la soo dhaafay Farmaajo wuxuu waqtigiisii ku kharash-gareeyey kor u qaadista danaha siyaasadeed ee aan fiicnayn, burburinta ciidamada amniga, ka takhluska Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka, iyo dib u soo nooleyta Al-Shabaab, natiijooyinkaas ayaana hadda dhamaantood bannaanka yaalla.
Qiimayntii ugu dambaysay ee Golaha Ammaanka ee Qaramada midobay, (UNSC), ee la xariiray hawlgallada Al-Shabaab ee Soomaaliya, ayaa ah mid aad xun, waxaana qiimeyntaas lagu sheegay in koofurta iyo bartamaha Soomaaliya, kooxdu la kulantay iska caabin yar markii ay qabsadeen dhowr magaalo iyo tuulooyin, muddo hore laga xoreeyay.